TARANJA TSIPY KANETIBE : Raikitra ny fifaninanana rezionaly, eny amin’ny “boulodrome” Ampasimazava
Ambohipihaonan’ireo mpitia ny taranja tsipy kanetibe, eny amin’ny “boulodrome” Ampasimazava, amin’ ity faran’ny herinandro ity. 18 mai 2017
Hotanterahina mandritra ny roa andro ny 20 sy ny 21 mey ho avy izao ny lalao fifaninanam-paritra eo amin’ity taranja iray ity. Tsy vita izany tamin’ny taon-dasa, noho ny tsy fisian’ny rafitra mipetraka, izany hoe, tsy mbola nanana filoha nitarika azy ny ligim-paritra atsinanana.
Amin’izao fotoana izao, birao vaovao no mandrafitra ny ligy Atsinanana, izay tarihin’
i Rivo, hiasa mandritra ny efatra taona.
Klioba enina eto Toamasina no handray anjara ao anatin’izany lalao fifaninanam-paritra izany dia ny klioban’ny CBET, UPB, UPE, UBT, CP501, ary Club Barikadimy. Anisany fepetra takiana amin’izao fifaninanam-paritra izao ny fananan’ny mpilalao tsirairay avy ny “licence”, mba hahafantaran’ny Federasiona Malagasy amin’ity taranja ity ny tena isan’ireo mpilalao manana izany “licence” izany eto Toamasina.
Ny fifaninanana izay hatrehina izao dia tafiditra indrindra ny amin’ny fanomanana sahady sy mba ho fiatrehana ny fifaninanam-pirenena izay hatao ny 3 sy ny 4 jona ho avy izao, ka ny tanànan’i Toamasina no hampiantrano izany.